अमेरिकामा गोराको तुलनामा कालो वर्णका मान्छेकाे किन धेरै मृत्यु भइरहेको छ ? – The Public Today
अमेरिकामा गोराको तुलनामा कालो वर्णका मान्छेकाे किन धेरै मृत्यु भइरहेको छ ?
विजय कुमार सिंह जेठ ८, २०७७ ८:५४ am
जेठ ८ गते : अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण गोरो वर्णका भन्दा कालो वर्णका नागरिकको बढी ज्यान गएको छ । मृतकको तथ्यांकका आधारमा अमेरिकामा अमेरिकन गोरो वर्णका भन्दा अफ्रिकी अमेरिकन नागरिकको कोरोना कारण तीन गुणा बढी मृत्यु भइरहेको छ ।
एपीएम रिसर्च ल्यावले यो नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । उसले यो रिसर्चलाई कलर अफ कोरोना भाइरस नाम दिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण अमेरिकामा प्रति लाख ५०.३ का दरले मृत्यु भइरहेको छ । यद्यपि गोरो वर्णका मानिसमा २०.७, ल्याटिन अमेरिकीहरुमा २२.९, एशियन अमेरिकीहरुमा २२.७ मृत्युदर रहेको छ ।
प्रत्येक दुई हजार कालो वर्णका अमेरिकीमा एक जनाको मृत्यु भइरहेको छ । कान्सासमा गोराको तुलनामा कालो वर्णका नागरिकको मृत्यु दर सात गुणाले बढी छ । वासिङ्गटनमा ६ गुणा बढी रहेको छ । मिसिगनमा पाँच, न्युयोर्कमा तीन गुणा बढी रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले युरोप र कालो वर्णका नागरिकको स्वास्थ्य स्थितिमा असमानता रहेका कारण कोरोनाको असर उनीहरुमा बढी देखिएको दाबी गर्दै आएको छ । उनीहरुमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मोटापना बढी रहनु यसको मुख्य कारण भएको ट्रम्प प्रशासनको भनाइ छ ।
आइतवार स्वास्थ्य सचिव अलेक्स अजरले कालो वर्णका मान्छेमा उच्च मृत्यु दरको कारण आर्थिक असमानता पनि भएको बताएका छन् । बाह्रखरी